Chipiri, July 21, 2015 12: 28: 00 AM America / Los_Angeles
Mumwe Armati 5 nyeredzi pahotera chirongwa tsika tepi muna China, anobvumirwa ashanyire hotera iri kuona tepi kwedu.
Armati mureza tepi catalouge ndapota tarisa zvinotevera:
Uri zvikuru nomufambi kunakidzwa Stylish, inotonhorera, asingakanganwiki zvakaitika panguva Hui Hotel (rinodudzwa "Kway"), yaiva chaizvo nyore kune Futian-Convention Centre & Huaqiangbei kunotenga nharaunda uye pedyo yakaisvonaka Shenzhen Central Park, 35? Km kubva Shenzhen Airport uye nyore kuwana zvose Shenzhen 's pamusoro yokufaranuka uye bhizimisi destinations.The Hui Hotel iri musha wakakwana zvebhizimisi yokufaranuka uye vafambi zvakafanana. Izvi hotera yakanaka uye Stylish akagadzirirwa nomumwe China wacho pamusoro vagadziri, Mr Yang Bang Shen uye chinotarisirwa yakakwirira mutsa mitemo basa kuburikidza Swisstouches Hotels uye Resorts - sezvo chikamu "The Most Unique Collection". Mubatanidzwa akakwana vaenzi vose
Custom Hotel tepi nyaya
mugadziri yokugezera tepi